Rastrabani.com | को हुन् मातृका यादव ? जाे उद्योग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्री बने - Rastrabani.com को हुन् मातृका यादव ? जाे उद्योग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्री बने - Rastrabani.com
को हुन् मातृका यादव ? जाे उद्योग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्री बने
काठमाडौं, १४ फागुन– माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मातृका यादव केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । यादवलाई उद्योग,वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । धनुषा एकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका यादव को हुन् त ?
एक मधेश एक प्रदेशको मुद्दा हालसम्म नछाडेका मातृका यादवले दुई वर्ष अगाडि माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेका हुन् । पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि पार्टीको कार्यालय सदस्य सहित उनी मधेशका इन्चार्ज पनि भए । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका मातृका यादव मधेशमा प्रभावकारी नेताको रुपमा चिनिन्छ । उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सहभागि भएका हुन् ।